Realkredit के हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा
सुरु ऋण wiki Realkredit
1.1 कुन कुरा वास्तविक छ?
1.2 Realkreditsplitting के छ?
1.2.1 वास्तविक वास्तविक क्रेडिट विभाजन
1.2.2 अचम्मको वास्तविक क्रडिट
1.3 कसले एक वास्तविक क्रेडिट प्रदान गर्दछ?
1.4 उधारकर्ताले कस्ता परिस्थितिहरू पूरा गर्नुपर्छ?
ऋणको एक प्रकार हो Realkredit, मासिक आय को माध्यम ले हेजिंग द्वारा पारंपरिक ऋण को विपरीत, यस प्रकार को क्रेडिट एक संपार्श्विक को रूप मा संपार्श्विक को रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यसरी, अपर्याप्त सार्थकताको साथ पनि उधारकर्ताहरू वा नकारात्मक schufa ऋण आउन सक्छ।
कुन कुरा वास्तविक छ?
एक नियमको रूपमा, अचल सम्पत्ति मालिकहरूले उनीहरूको घर वा आफ्नै घरमा पुन: विकास वा पुनर्मूल्यांकन गर्न सक्षम हुनका लागि दीर्घकालिक वास्तविक क्रेडिटको लागी आवेदन गर्दछ। एक वास्तविक सम्पत्ति वा प्रतिज्ञाको रूपमा, सम्पत्ति एक बंधक वा भूमि शुल्कको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तथापि, वास्तविक ऋण पनि वर्तमान तरलता बढाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ।
ब्याज दर या तो चर या निश्चित हुन सक्छ। क्रेडिट सीमा सामान्यतया लिङ्क गरिएको वस्तुको 60 प्रतिशत हो। Realkreditsplitting को मामला मा, एक उच्च उधार सीमा को व्यक्तिगत रूप देखि पनि लागू गर्न सकिन्छ।
Realkreditsplitting के छ?
यदि क्रेडिट सीमा सामान्य 60 प्रतिशत भन्दा माथि छ भने पुन: क्रेडिट को विभाजन सधैं आवश्यक छ र यसरी एउटा महत्त्वपूर्ण राम्रो जोखिम वर्गीकरण आवश्यक छ। व्यवहारमा, वास्तविक र गैर-वास्तविक वास्तविक ऋण जोखिमको बीच एक भेद बनाइन्छ।
वास्तविक वास्तविक क्रेडिट विभाजन
कुल2क्रेडिट, एक नामित रियल-स्टेट क्रेडिट क्रेडिट नोट, र ल्याण्ड रजिस्टर प्रविष्टि द्वारा सुरक्षित गरिएको क्रेडिट समाप्तिमा समावेश गरिएको छ। कुल क्रेडिट यस प्रकार "विभाजित" दुई भागमा छ, अर्थात् विभाजित।
अचम्मको वास्तविक क्रडिट
एक गैर वास्तविक छूट ऋण को मामला मा, एक भाग एक साधारण क्रेडिट को माध्यम ले 60 - प्रति प्रतिशत उधार सीमा संग बसे छ, शेष राशि एक साधारण ऋण द्वारा बसे छ व्यक्तिगत ऋण प्राप्त। यस उधारको मामलामा, सबै सर्तहरू मात्र एक क्रेडिट सम्झौता मार्फत समाप्ति गरिन्छ।
एक क्रेडिट कार्ड प्राप्त गर्न को लागी उधारकर्ता निश्चित निश्चित संस्थाहरू लाई घुमाउनु पर्छ किनकि हरेक वित्तीय संस्थाले वास्तविक ऋण प्रदान गर्दैन।
कसले एक वास्तविक क्रेडिट प्रदान गर्दछ?
यदि तपाइँ वास्तविक ऋण रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले पाउनुहुनेछ कि प्रत्येक बैंकले क्रेडिटको यो फारम प्रदान गर्दैन। विशेष पुन: क्रेडिट संस्थाहरु को अतिरिक्त, निम्नलिखित कम्पनीहरु को यस विशेष क्रेडिट को पुरस्कार को संभावना पनि छ।
यसमा बचत बैंकहरू, सहकारी बैंकहरू, भवन समाजहरू र व्यापारिक बैंकहरू समावेश छन्। ऋण पूरा गर्नु अघि, तपाइँलाई फरक परिस्थितिको बारेमा सूचित गर्नुपर्छ। यसले तपाईंलाई पैसा बचत गर्न सक्छ।
उधारकर्ताले कस्ता परिस्थितिहरू पूरा गर्नुपर्छ?
भौतिक सम्पत्तिको माध्यमबाट सुरक्षित क्रेडिट प्राप्त गर्न, केहि आवश्यक पूर्वनिर्धारितहरू पूरा हुनुपर्छ:
- क्रेडिट कम्पनीले अचल सम्पत्ति ऋण, अर्थात् अचल सम्पत्ति आधारित ऋण राख्न सक्षम हुन लाइसेन्स हुनुपर्दछ।
- सम्पत्तिको मूल्य कागजात र हालको मार्केट मूल्य र इच्छित बजार मूल्यको मूल्याङ्कन गरेर एक स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा मूल्याङ्कन गरिनु पर्छ जमानत मूल्य गरेको।
- सम्पत्तिको बजार मूल्य नियमित अवधिमा ऋणको अवधिमा जाँच गर्न अनिवार्य छ। विधायकले बताएअनुसार निजी क्रेडिटको स्थिति निजी रूपमा प्रदान गरिसकेको छ भने, व्यापारिक ऋणको अवस्थामा 12 महिना भित्र पनि चेक अधिकतम तीन वर्षमा लाग्न सकिन्छ।
- उधारकर्ताले विशेष भवन बीमाको कारणले क्षतिको लागि पर्याप्त मात्रामा आफ्नो सम्पत्ति बीमा गरेको हुनुपर्छ।
- उधारदाता पनि आचरणको मामलामा भौतिक मानलाई कानूनी रूपमा लागू गर्न सक्षम हुनु पर्दछ।
राप्रफ्रिड लामो समयसम्म पैसा लिने को लागी एक राम्रो तरीका हुन सक्छ पर्याप्त पर्याप्त सावधानी वा पर्याप्त मासिक आय बिना। उल्टो पक्ष यो हो कि यस क्रेडिट को लागी सिर्फ सम्पत्ति मालिकहरु को लागि हो। यदि लाइभ सर्तहरू परिवर्तन भएमा तपाईं आफ्नो समयमा भुक्तानी दायित्वहरू पूरा गर्न सक्नुहुन्न भने, तपाइँले तपाइँको सम्पत्तिलाई ऋणमा गुमाउन सक्नुहुनेछ। यसैले एक कलरक क्रेडिडको निष्कर्षलाई राम्ररी मानिन्छ।
अघिल्लो लेखआरक्षण बंधक